China oo lacag ugu deeqday AMISOM
10 Nov 10, 2012 - 5:49:54 AM
Xukuumada China ayaa Howgalka Midowga Afrika ee AMISOM ugu deeqay lacag gaaraysa $12 million, kuwaasoo ay sheegtay in lagu xoojinayo howgalka Nabad ilaalinta ah ee ciidamada Midowga Afrika ay u joogaan Somalia.
Sarkaalad u hadashay Midowga Afrika ayaa sheegtay in lacagtan ay wax weyn ka tari doonto howgalka ciidamada Midowga Afrika ay ka wadaan Somalia, kuwaasoo la doonayo lagu soo celiyo degenaashaha Somalia.
Dowlada Beijing ayaa sheegtay in lacagtan ay ugu talogashay in dhinaca qalabka ay u adeegsadaan ciidamada AMISOM, kuwaasoo ay sheegtay inay ku jiraan howl ay ku caawinayaan shacabka iyo dowlada Somalia.
Lacagtan ayaa waxay dowlada China kusoo beegmay xili ay Golaha Amaanku muddo afar bilood ah ku kordhiyeen howlgalka Midowga Afrika ee Somalia, iyadoo Ururka Midowga Afrika uu aad u soo dhaweeyay lacagtan.
Ciidamada AMISOM ayaa oo tiradoodu ka badan tahay 17,000 oo askari ayaa kula jirta dagaal Maleeshiyada Al-shabaab oo deegaano badan lagamqabsaday, waxaana tani ay sii xoojinaysaa howlgalka AMISOM ee ka dhanka ah Al-shabaab.
Dhanka kale Dowlada Uganda oo ciidamadeedu ay sadex meelood laba meel yihiin ciidamada AMISOM ee Somalia ku sugan ayaa ku hanjabaysa inay ciidamadeeda kala baxayso Somalia, kadib markii lagu eedeeyay inay taageerto jabahad dagaal kula jirta dalka ay dariska yihiin ee DR Congo.
Inkastoo Mareykanka ay dadaal ugu jirtaan sidii ay Ciidamada Uganda u sii joogi lahaayeen Somalia ayaa hadana Madaxda dalkaas waxay ku adkeysanayaan in hadii aan laga laaban eedeynta loo jeediyay ay isaga baxayaan Somalia iyo dalal kale oo ku yaala Afrika.